Topiramate powder (97240-79-4) hplc = 98% | Mafuta AASraw Kurasikirwa nehupfu
/ Products / vamwe / Topiramate poda
Rating: SKU: 97240-79-4. Category: vamwe
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhuwandu hweTopiramate powder (97240-79-4), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Raw Topiramate powder Basic Characters
Molecular Kurema: 339.36
Raw Topiramate powder mukurasikirwa kwekukura
Topiramate powder, Topomax, Qudexy XR, Topamax Futa, Topiragen, Trokendi XR
Raw Topiramate powder Usage
Topiramate powder ndeyomushonga wemishonga iyo inoshandiswa kudzivirira kukanganisa kwekufa. Icho chinonzi anti-epileptic kana anti-seizure drug. Inoshandiswa zvikuru pakati pevarwere vasina kutungamirirwa nedzimwe mishonga inorwisa epileptic. Nezve 1 mu4 vaAmerica vakaonekwa kuti vane hosha dzakagumburwa dzinoramba kurapwa nedzimwe mishonga inorwisa epileptic. Topiramate powder inodzivirira migraine musoro.
Kugwinha kuri kukonzerwa nezviitiko zvisina kujairika ("kupfura") zvetsinga muuropi, uye chiitiko chisina kujairika chinopararira kuzvikamu zvidiki kana zvakakura zvehuropi. Kunyange zvazvo Topiramate powder chaiyo nzira yekuita isingazivikanwi, zvidzidzo zvezvesayenzi zvinoratidza kuti inogona kuchinja maurotransmitter mukati meuropi. Neurotransmitters makemikari anogadzirwa nemitsipa uye anoshandiswa kutaura nedzimwe tsinga dziri padyo. Nekushandura kugadzirwa kana chiito cheaurotransmitter, Topiramate poda inogona kudzvinyirira chiitiko chisina kujairika chetsinga muuropi dzinokonzeresa kana kudzivirira chiitiko chisina kujairika kupararira kune dzimwe tsinga. Zvimwe zvidzidzo zvinoratidza kuti Topiramate powder inogona kudzvinyirira tsinga dzakananga (kureva.
Tevera zvirevo zvechiremba wako. Fona kana uine chero mibvunzo. Kazhinji, chiremba wako anokuudza kuti utange nekutora imwe 25-milligram piritsi kaviri pazuva. Mushure mechinguva, chiremba anogona kuwedzera zvishoma nezvishoma muyero kuti uwane kudzora kuri nani kwekubatwa kwako. Nekuti Topiramate poda inowanzo kutorwa kaviri pazuva, vanhu vazhinji vanozvibatsira kurangarira nekuitora pamwe nekudya kwemangwanani uye kwemanheru. Bvunza chiremba wako zvekuita kana ukakanganwa kutora dose.
Ese maviri mafomu eTopamax anogona kutorwa pamwe nechikafu kana pasina chikafu, asi zvakanakisa kuva zvinowirirana zuva nezuva.
Ive nekuchenjerera kana chiremba vakanyora mushonga mutsva vachishandisa imwe mhando yepiritsi. Semuenzaniso, kana wanga uchishandisa mapiritsi e25-mg uye mushonga mutsva ndewemapiritsi e100-mg, chenjera kushandisa iyo chaiyo nhamba. Usangoerekana waenderera kushandisa iyo yakafanana nhamba yemapiritsi sepakutanga. Ita shuwa kuti iwe unoziva kuti saizi piritsi yakatemerwa
Kana iwe ukatora mapiritsi, chimedza imwe neimwe yakazara. Usazviruma. (Zvichava zvinovava.)
Kumwaya macapsule inzira iri nyore yekupa Topamax kuvana uye nevamwe vane dambudziko rekumedza mapiritsi. Iwo macapsule anogona kumedzwa akazara, asi kazhinji anovhurwa uye zvirimo zvinosaswa pamusoro petipuni yezvokudya zvakapfava senge applesauce, custard, ice cream, oatmeal, pudding, kana yogati. Heino maitiro:
Wanai teaspoon yezvokudya yakagadzirirwa.
Bata capsule yakatwasuka kuti iwe ugone kuverenga izwi rekuti "TOP."
Tora kapule pamusoro pezvokudya uye shandura chikamu chakajeka che capsule.
Fukidza zvese zvemukati mechikafu muchikafu.
Medza chipunu chese ipapo pasina kuchitsenga. (Ichazoravira zvinovava kana ikatsengwa.) Kunwa imwe mvura kana imwe mvura ipapo zvinogona kubatsira kuona kuti chikafu chese chamedzwa. Usambofa wakachengetedza chero mushonga wakasanganiswa nechikafu chekushandisa gare gare.
Iva nechokwadi chekutora chete mari iyo chiremba wako anokuudza kuti utore.
Warning on Raw Topiramate powder
Zvipembenene zvakawandisa zveTopiramate powder ndezvi:
kuchinja mune zvakaratidzwa kana
kutinhira kana kunetseka kwemaoko nemaoko,
kuoma nekuyeuka, uye
Zvimwe zvikamu zvinokosha zvinosanganisira:
kuwedzera ammonia mazinga,
yakaderera kutuka, uye
kuwedzera muviri wekushisa ..
Topiramate poda inogona kukuvadza mwana asati aberekwa, asi kubatwa nepamuviri kunogona kukuvadza mai nemwana. Udza chiremba wako pakarepo kana iwe ukava nepamuviri paunenge uchitora Topiramate powder kuti uwane. Usatanga kana kumira kutora Topiramate poda panguva yekuzvitakura pasina zano rerachiremba.
Tsvaka rubatsiro rwekukurumidzira kana uchinge uchinjeka pane zvawakaratidzwa kana kurwadziwa kumativi kana kumashure kwemaziso. Izvi zvinogona kunge zviri zviratidzo zvekutanga zvekutsvaira uye kusingagumi kwechikamu pane zvawakaratidzwa.
Usarega kushandisa Topiramate powder usingatauri nachiremba wako, kunyange kana iwe uchinzwa zvakanaka. Iwe unogona kunge wakawedzera kukurumidza kana ukamira kushandisa Topiramate powder kamwe kamwe. Iwe unogona kunge uchida kushandisa zvishoma nezvishoma usati warega mishonga zvachose.
Taura nachiremba wako kana kukanganisa kwako kunowedzera kuwedzera kana iwe uine dzimwe nguva paunotora Topiramate powder.
Nzira yekutenga Topiramate powder kubva kuAASRAW